﻿ मोटोपनबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ?
मोटोपनबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ?
यदी तपाई हप्तामा एक वा दुई पाउण्ड तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्रत्येक दिन ५०० क्यालोरी जलाउनु पर्छ । तौल छिटो घटाउने सबैभन्दा उत्तम तरिका भनेको धेरै एक्सरसाइज गर्नु र थोरै खानु नै हो । मोटोपनबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने यि कुराहरुलाई ध्यान दिनुहोस् :
२। यदी तपाई आफ्नो तौल छिटो घटाउन चाहनुहुन्छ भने दिनको कम्तिमा पनि १ घण्टा सामान्य शारिरिक अभ्यास गर्नुहोस् । दैनिक गरिने शारिरिक अभ्यासले तपाईलाई फिट र स्लिम बनाउँछ । छिटो तौल घटाउन गरिने एक्सरसाइजहरु निम्न छन्
किन बिहान छिटै उठ्ने ? यस्ता छन् फाइदा
सावधान ! कहिल्लै नखानुहोस् पत्रपत्रिकामा राखेका खानेकुरा
चीनबाट ल्याइएका नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको पुष्टि